कतै तपाईको जीवन संगेनी यस्ता भ्रममा त छैन ? यसरी सजिलै संग आफ्नो बारे पत्ता लगाउन सकिने – सुदूरखबर डटकम
कतै तपाईको जीवन संगेनी यस्ता भ्रममा त छैन ? यसरी सजिलै संग आफ्नो बारे पत्ता लगाउन सकिने
मानिसहरुको सम्बन्ध विश्वासमा अड्किएको हुन्छ । विश्वास लाग्दैन सम्बन्ध त्याग्दा हुन्छ । अन्यथा विश्वासिलो बनाउने आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । युवायुवतीमा यस्ता समस्या देखिरहन्छन् सम्बन्ध तोड्न झैँ जोड्न सहज पक्कै हुँदैन ।
पार्टनरसँगको असझदारीमा सम्बन्ध तोड्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफैसँग केही प्रश्न गर्नु उत्तम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफैँसँग गरिने प्रश्नको अधिकांश उत्तर हो मा आयो भने ब्रेकअप गर्नु राम्रो । हैनमा आयो भने सम्बन्ध सुधार्ने बाटो अझै बाँकी छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ ।
ब्रेकअपको निर्णय अगाडि आफैँसँग प्रश्न गर्नुस्
के पार्टनरले धोका दिइरहेको छ ? अधिकांश सम्बन्ध तोडिनुको कारण सम्बन्धमा इमानदारिताको कमी नै हो । ऊ एकभन्दा बढी सम्बन्धमा हुनसक्छ । एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग एकैपटक डेटमा बस्ने पनि हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ यो शंकाको परिणाम पनि हुनसक्छ । शंकाकै भरमा सम्बन्ध तोड्ने राम्रो हैन । पार्टनरको व्यवहारमाथि शंका छ भने मनमा गुम्स्याएर नराखी प्रस्ट कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ । यसले झुठ बोलिरहेको हो या शंका सत्य हो भन्ने छुटिन्छ । यदि धोका दिइरहेको देखिए पुनर्मिलन भन्दा ब्रेकअपको निर्णय राम्रो हो ।
पछुताउनुभन्दा विकल्पा खोज्नु उत्तम
सम्बन्ध तोड्ने निर्णय अगाडि आफैँसँग बारम्बार प्रश्न गर्नुस् । कतै यो निर्णयले पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था त आउँदैन ? ब्रेकअप गरिसकेपछि उसको यादले धेरै सताउने पो हो कि, सँगै बिताएका पलले पटक–पटक झस्काउने हो कि ? उसैको सम्झना आइरहने हो कि ? सम्बन्ध तोडेर मानसिक तनावमा परिने पो हो कि ? यी प्रश्नको अधिकांश जवाफ हो मा आयो भने सम्बन्ध सुधारमा लाग्नु उत्तम ।
समय छैन भन्ने आडमा भ्रममा राखेको त छैन ?
पार्टनबीच एक अर्कासँग बिताउने समय नहुँदा पनि धेरै सम्बन्ध टुटिरहेका छन् । यदि तपाईंको पार्टनरले पनि पर्याप्त समय दिइरहेको छैन भने ऊसँग समय नै नभएर नदिएको हो या बहाना बनाएको यो विषयमा सवैभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा पार्टनरसँग समय भएको बेलामा तपाईंसँग समय नहुनसक्छ, कहिले तपाईंसँग समय भएको बेलामा पार्टनर व्यस्त हुन सक्छन् । यो हो भने संयोग मात्र हो । यस्तो हो भने यसमा दुवैको दोष हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रेकअप गर्नुभन्दा समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु मानिन्छ ।
सम्बन्धको प्रारम्भमा मनमा प्रेम भए पनि सम्बन्ध अगाडि बढेसँगै बिस्तारै सम्मान र प्रेम घट्दै जानसक्छ । यसका विविध पक्ष हुन सक्छन् । प्रारम्भमा सोचेको कुरा विस्तार पूरा नहुँदा अवस्था झन जटिल मोडमा पुग्छ । यदि यो चरणमा सम्बन्ध पुगिसकेको छ भने सम्बन्ध तोड्नु राम्रो । तर पार्टनरको मनमा प्रेम नभएको भ्रम हो या हैन त्यसमा भने राम्रो ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।
मानसिक तनावले च्यापेको त छैन ?
व्यस्त जीवन मानिसलाई मानसिक समस्यातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । यसले व्यक्ति झगडालु, सानो विषयमा रिसाइहाल्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य गुनासोले पनि सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ र व्यक्ति सम्बन्ध टुटाउने निर्णयमा पुग्नसक्छ । सनकको भरमा यसलाई तोड्नु उत्तम हुँदैन । सकेसम्म रिसलाई काबुमा राखेर सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ ।